येशूद्वारा स्वीकार्य, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
इसाईहरू प्राय: हर्षको साथ घोषणा गर्छन्: "येशू सबैलाई स्वीकार्नुहुन्छ" र "कसैलाई पनि इन्साफ गर्दैन"। यद्यपि यी आश्वासनहरू निश्चित रूपमा सत्य छन्, म देख्न सक्दछु कि उनीहरूलाई बिभिन्न अर्थहरू दिइएका छन्। दुर्भाग्यवस, ती मध्ये कतिले नयाँ करारमा हामीलाई घोषणा गरे अनुसार येशूको प्रकाशबाट विचलित भए।
ग्रेस कम्युनियन इन्टरनेसनलको सर्कलमा यो वाक्यांश प्रायः प्रयोग गरिन्छ: "तपाई यसमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ"। यो सरल कथन एक महत्त्वपूर्ण पक्ष व्यक्त गर्दछ। तर यो पनि फरक तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ (र यो हुनेछ)। हामी वास्तवमा के हौं? यी र यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ दिन हेरचाह आवश्यक छ किनकि विश्वासमा हामीले तुलनात्मक प्रश्नहरू समावेश गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ ताकि हामी बाइबलीय प्रकाशको सत्यता र वफादार रहन सक्छौं।
निस्सन्देह, येशूले सबैलाई आफुमा बोलाउनुभयो, उहाँ आफैले ती सबैका लागि आफूलाई अर्पण गर्नुभयो र तिनीहरूलाई आफ्नो शिक्षा दिनुभयो। हो, उनले सबै सुन्ने सबैलाई आफूतर्फ खिच्ने वचन दिए (यूहन्ना १०:१०)। वास्तवमा, कुनै प्रमाण छैन कि उनले कसैलाई अस्वीकार गरे, कसैबाट तर्किए, वा उनीसँग भेट गर्ने व्यक्तिलाई भेट्न अस्वीकार गरे। बरु, उनले ती व्यक्तिहरूलाई पनि ध्यान दिए जो आफ्नो समयका विश्‍वासी नेताहरूले बहिष्कार गरिएको ठान्थे, र उनीहरूसँगै खाए पनि।
यो विशेष गरी उल्लेखनीय छ कि बाइबलले कसरी कुष्ठरोगी, लme्गडा, अन्धा, बहिरा र गुँगोलाई स्वागत गर्यो र उनीहरूसँग कुराकानी गर्‍यो भनेर रिपोर्ट गर्न जान्दछ। उसले सम्पर्क कायम राख्यो (केहि अवस्थाहरूमा श be्कास्पद रूपमा कष्ट गरिएको) व्यक्ति, पुरुष र महिलाहरू, र उनीहरूसँग व्यवहार गर्ने तरिकामा आफ्नो समयको मान्यताहरूलाई वेवास्ता गरे। उनले व्यभिचारीहरू, रोमी सार्वभौमिकता अन्तर्गत यहूदी कर उठाउनेहरू र कट्टरपन्थी, रोमी विरोधी, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूसँग पनि व्यवहार गरे।
उनले आफ्नो समय फरिसीहरू र सदुकीहरूसँग पनि बिताए (र तिनीहरू मध्ये कतिपयले गोप्य रूपमा उनको कार्यान्वयनको योजना गर्दै थिए)। प्रेरित यूहन्नाले हामीलाई भने कि येशू न्याय गर्न आउनुभएन तर सर्वशक्तिमानको इच्छाको लागि मानिसहरूलाई बचाउन र छुटकारा दिन आउनुभयो। येशूले भन्नुभयो: "[... ... जो कोही मकहाँ आउँछ, म उसलाई धपाउने छैन)" (यूहन्ना १०:१०)। उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई शत्रुहरूलाई माया गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो (लूका :6:२:27) तिनीहरूलाई अन्याय गर्नेहरूलाई क्षमा दिन र तिनीहरूलाई श्राप दिनेहरूलाई आशिष् दिन (लूका :6::28) मृत्युदण्ड पाइसकेपछि येशूले आफ्ना अपराधीहरूलाईसमेत क्षमा गर्नुभयो (लूका :23::34)
यी सबै उदाहरणहरूबाट के देखिन्छ भने येशू सबैको फाइदाको लागि आउनुभयो। ऊ सबैको पक्षमा थियो, ऊ सबैका लागि "थियो"। यो भगवानको अनुग्रह र छुटकाराको लागि खडा छ, जसमा सबैले समावेश गर्दछ। नयाँ नियमको बाँकी भागहरूले के कन्डेन्स् भएको कुरा प्रतिबिम्बित गर्छन्
हामी येशूको जीवनको सुसमाचारमा देख्छौं। पावलले औंल्याए कि येशू पृथ्वीमा भक्तिहीन, पापीहरू, "पाप र पापका कारण मरेकाहरूको पाप" बचाउन आउनुभयो। (एफिसी २: १) प्रायश्चित गर्नु पर्ने थियो।
मुक्तिदाताको मनोवृत्ति र कार्यले सबै मानिसहरुप्रति परमेश्वरको प्रेम र तिनीहरुसंग मिलाप गर्न र आशीर्वाद दिनको इच्छाको गवाही दिन्छ। येशू जीवन दिन आउनुभयो र यो "प्रशस्ततामा" (यूहन्ना १०:१०; गुड न्यूज बाइबल)। "परमेश्वर ख्रीष्टमा हुनुहुन्थ्यो र संसारलाई आफैंमा मिलाप गर्नुभयो" (२ कोरिन्थी :2:१:5)। येशू उद्धारकको रूपमा आफ्ना पापहरू र अरू कैदीहरूको दुष्कर्मबाट छुटकारा पाउनुभएको थियो।
तर यस कथामा अझ धेरै कुरा छन्। एक "अधिक" जुन कुनै पनि हालतमा विरोधाभास वा भर्खर एक मात्र उज्यालो भएको बीचको तनावमा देख्न मिल्दैन। कतिपयको धारणाको विपरित, येशूको भित्री हृदय, उसको सोचाइ र आफ्नो भाग्यमा विरोधाभासपूर्ण स्थितिहरू छन् भनेर अनुमान गर्नु आवश्यक छैन। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको आन्तरिक सन्तुलन कार्य पहिचान गर्न आवश्यक पर्दैन जुन एक दिशामा प्रयास गर्दछ र अन्यलाई सुधार गर्दछ। एक व्यक्तिले विश्वास गर्नुपर्दैन कि येशूले विश्वासका दुई पक्षहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नुभयो जुन विभिन्न दिशातर्फ औंल्याइन्छ, जस्तै प्रेम, न्याय, अनुग्रह र पवित्रता। हामी आफ्नो पापीपनको त्यस्तो विरोधाभासपूर्ण स्थानको बारेमा सोच्न सक्छौं तर तिनीहरू येशू वा उहाँको पिताको हृदयमा वास गर्दैनन्।
बुबाजस्तै, येशू सबैलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। तर उसले यो विशेष अनुरोधका साथ गर्छ। उसको प्रेम ट्रेंड सेटिंग हो। उहाँ सुन्नुहुने सबैलाई बाध्य गर्नुहुन्छ कि प्रायः लुकाइएको कुरा प्रकट गर्न। उहाँ विशेष रूपमा एउटा उपहार छोड्न र दिशात्मक, गोल-उन्मुख तरिकामा सबैको सेवा गर्न आउनुभयो।
सबैको लागि उसको स्वागत एक स्थायी, स्थायी सम्बन्धको लागि सुरूवात भन्दा कम अन्तिम बिन्दु हो। त्यो सम्बन्ध दिने र सेवा गर्ने र उहाँ हामीलाई के प्रस्ताव गर्नुहुन्छ स्वीकार गर्ने बारे हो। ऊ हामीलाई पुरानो केहि प्रस्ताव गर्दैन वा परम्परागत तरिकामा हामीलाई सेवा गर्दछ (हामी रुचाउँछौं)। बरु, उसले हामीलाई दिने उत्तम कुरा मात्र दिन्छ। र त्यो उहाँ आफैले हुनुहुन्छ। र उहाँ हामीलाई मार्ग, सत्य र जीवन दिनुहुन्छ। अरु केहि पनि होइन।
येशूको मनोवृत्ति र उसको स्वागतयोग्य कार्यको लागि आफूलाई दिंदा केही खास प्रतिक्रियाको आवश्यक पर्दछ, संक्षेपमा भन्नुपर्दा, उहाँले आफुले दिने प्रस्तावलाई स्वीकार्नु पर्छ। यस धारणाको विपरित, कृतज्ञ भई उहाँको उपहारलाई स्वीकार्नु, जुन उसले अस्वीकार गर्दछ जुन आफूलाई अस्वीकार गर्ने बराबर हो। सबै मानिसहरूलाई आफूतिर तान्दै येशू आफ्नो प्रस्तावमा सकारात्मक प्रतिक्रियाको आशा गर्नुहुन्छ। र उहाँले औंल्याए जस्तै, सकारात्मक प्रतिक्रिया उहाँलाई एक निश्चित दृष्टिकोण आवश्यक छ।
तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भनेर घोषणा गर्नुभयो। उहाँमा सबै आशिष्हरू तयार छन्। तर उनले विश्वासको त्यस्तो वास्तविक सत्यलाई आउँदै गरेको स्वर्गीय राज्यको "तपस्या गर र सुसमाचारमा विश्वास गर" भन्ने कुरा तुरुन्तै देखाए। येशू र उहाँको राज्यमा पश्चात्ताप गर्न र विश्वास गर्न इन्कार गर्नु आफूलाई र उहाँको राज्यको आशिष्लाई इन्कार गर्नु बराबर हो।
पश्‍चात्ताप गर्न इच्छुक हुन नम्र मनोवृत्ति चाहिन्छ। हामीलाई स्वीकार गर्दा येशू स्वयम्ले यो स्वीकार्यताको आशा गर्नुहुन्छ। किनभने नम्रता मात्र हामी प्राप्त गर्न सक्छन् उहाँ प्रदान गर्दछ। यो ध्यान दिनुपर्दछ कि हाम्रो उपहारमा हाम्रो बारेमा त्यस्तो प्रतिक्रिया हुनु अघि हामीलाई उपहार दिइयो। कडाईका साथ बोल्दा, यो हामीलाई दिइने उपहार हो जुन प्रतिक्रियालाई ट्रिगर गर्दछ।
पश्‍चात्ताप र विश्वास भनेको येशूको उपहारलाई ग्रहण गर्ने प्रतिक्रियाहरू हुन्। तिनीहरू यसका लागि पूर्व शर्त छैनन्, न त उहाँ को गर्नुहुन्छ भन्नेमा फरक पर्दछ। उसको प्रस्तावलाई स्वीकार्नु पर्छ र अस्वीकृत गर्नु हुँदैन। यस्तो अस्वीकृतिले के फाइदा लिन सक्छ? कुनै पनि होईन।
आफ्नो प्रायश्चितको निम्ति कृतज्ञ स्वीकृति, जसको लागि येशूले सँधै चाहनुहुन्थ्यो, धेरै पटक उनका यी शब्दहरूमा व्यक्त गरिएको छ: "मानिसको पुत्र हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउन आयो"। (लूका १ :19: १०; गुड न्यूज बाइबल)। "यो स्वस्थ छैन जसलाई डाक्टरको आवश्यकता छ, तर बिरामीहरू" (लूका,, ;१; आइबिड।) "साँच्‍चै, म तिमीलाई भन्‍दछु, जसले एक छोराले जस्‍तै परमेश्वरको राज्‍य ग्रहण गर्दैन, ऊ पस्‍न पाउनेछैन"। (मार्क १०:१:10)। हामी त्यो माटोजस्तै हुनुपर्दछ जसले बीउ छर्नेले बीउ ग्रहण गर्छ, जसले "वचनलाई आनन्दसाथ ग्रहण गर्दछ" (लूका :8::13) "पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर्नुहोस् [...]" (मत्ती २:6: १))
येशूको उपहारलाई स्वीकार्नु र त्यसबाट फाइदा उठाउनुको अर्थ हामी हराएको र भेट्नै पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु, हामी बिरामी छौं र हामीलाई निको पार्ने डाक्टरको खाँचो छ, कि हामी उहाँहरूसँग आपसी आदानप्रदानको आशा बिना बाँड्न सक्छौं। हाम्रो प्रभुको लागि खाली हात आउनुहोस्। किनभने एउटा बच्चाजस्तै हामी पनि सोच्न सक्दैनौं कि हामीलाई चाहिएको कुरा उहाँसँग छ। त्यसकारण येशू औंल्याउनुहुन्छ कि तिनीहरू "आध्यात्मिक तवरमा गरीब" हुन् जसले परमेश्वर र उहाँको स्वर्गको राज्यको आशिष पाउँछन्, र आफूलाई आत्मिक रूपमा धनी ठान्नेले होइन। (मत्ती २:5: १))
इसाई शिक्षाले यो उदारताद्वारा ख्रीष्टमा आफ्नो सृष्टिलाई नम्रताको इशाराको रूपमा प्रदान गरेको कुराको स्वीकार्यताको चरित्र हो। यो यस्तो मनोवृत्ति हो जुन यस स्वीकारसँग मिल्दछ कि हामी आत्मनिर्भर छैनौं, तर जीवन हाम्रो सृष्टिकर्ता र उद्धारकको हातबाट ग्रहण गर्नुपर्छ। यो विश्वासार्ह स्वीकृतिको विपरित
मनोवृत्ति गर्व को कि छ। इसाई शिक्षाको सम्बन्धमा, परमेश्वरको स्वायत्तताको भावना, आफैमा भरोसा, आफ्नै योग्यतामा समेत, परमेश्वरको अनुहारमा पनि, गर्वका साथ प्रकट हुन्छ। यस्तो घमण्डलाई परमेश्वर केहि चीज चाहिन्छ भन्ने कुराको विचारबाट चित्त बुझेको छ र विशेष गरी उहाँको क्षमा र अनुग्रहबाट। गर्वले तब आत्म-धर्मीले इन्कार गर्दछ जुन सर्वशक्तिमानबाट अपरिहार्य केहि स्वीकार्न अस्वीकार गर्दछ, जसको ख्याल राख्नु पर्दछ। हामी आफैले आफै गर्न सबै गर्न सक्षम भएकोमा गर्व गर्दछौं र फलफूलका लागि योग्य छ। उसले परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाको आवश्यकता नभई आफैलाई आफ्नो जीवनको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्षम बनाउन खोज्छ। गर्व भगवान सहित कसैलाई वा कुनै पनि संस्था प्रतिबद्ध हुन असफल। उहाँ हामीमा केहि पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन भन्ने तथ्यलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ। हामी जस्तो गरी छौं, यो राम्रो र सुन्दर छ। यसको विपरित, नम्रताले स्वीकार्दछ कि तपाईं आफैले जीवनको नियन्त्रण लिन सक्नुहुन्न। यसको सट्टा, उनी केवल मद्दतको आवश्यकता मात्र होइन, बदल्न, नविकरण, पुनर्स्थापना र मेलमिलापमा पनि सहमत छिन्, जुन एक्लो भगवानले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। नम्रताले हाम्रो अक्षम्य असफलता र आफैंमा एक नवीनता ल्याउनको लागि हाम्रो चरम असहायतालाई मान्यता दिन्छ। हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रहको आवश्यकता छ, वा हामी हरायौं। हाम्रो घमण्डलाई मर्नुपर्दछ जसमा हामी आफैले परमेश्वरबाट जीवन पाउँदछौं। येशूले हामीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको कुरा प्राप्त गर्न खुला दिमाग र नम्रता अतुलनीय छ।
अन्तमा, येशू सबैलाई आफैंले आफूलाई अर्पण गर्न स्वागत गर्नुहुन्छ। उसको स्वागत यसैले गोल उन्मुख छ। यो कतै नेतृत्व गर्दछ। उसको भाग्यमा आफूलाई समावेश गर्न आवश्यक पर्ने कुरा समावेश गर्दछ। येशूले आफ्नो बुबाको उपासना गर्न सक्षम हुन आएको कुरा औंल्याउनुभयो (यूहन्ना १:4,23:१) आफैंलाई स्वागत गर्ने र स्वीकार गर्ने अर्थ औंल्याउने यो सब भन्दा व्यापक तरीका हो। आराधना गर्दा, यो स्पष्ट छ कि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जो हाम्रो अटुट भरोसा र वफादारीको योग्य हुनुहुन्छ। येशूले आफूलाई समर्पण गर्दा पिताको साँचो ज्ञान र पवित्र आत्माले उहाँमा काम गर्न दिने इच्छुकतातिर डोर्‍याउँछ। यसले पवित्र आत्माको कार्यअन्तर्गत पुत्रको सद्गुणद्वारा परमेश्वरको एकमात्र आराधना गर्दछ, अर्थात् सत्य र आत्मामा परमेश्वरको उपासना। किनभने हाम्रो निम्ति आफूलाई अर्पण गरेर, येशूले आफैंलाई हाम्रो प्रभु, अगमवक्ता, पुजारी र राजाको रूपमा बलिदान गर्नुभयो। यसका साथ उनले पितालाई प्रकट गर्छन् र हामीलाई उहाँको पवित्र आत्मा पठाउँछन्। उहाँ आफू को हो भनेर होइन, तर उहाँ हाम्रो होइन, हाम्रो इच्छा वा विचारहरूको आधारमा पनि दिनुहुन्छ।
र यसको मतलब यो हो कि येशूको तरिका न्याय गर्न आवश्यक छ। यसमा प्रतिक्रियाहरूको वर्गीकरण कसरी गरिन्छ। उहाँलाई र उहाँको वचनलाई बदनाम गर्नेहरूलाई साथै परमेश्वर र उहाँको सही उपासनाको विरोध गर्नेहरूलाई उहाँ चिन्नुहुन्छ। उसले जसले पाउने र नपार्नेको बीचमा भिन्नता राख्छ। यद्यपि यो भिन्नताको मतलब यो होइन कि उसको मनोवृत्ति वा आशय कुनै पनि तरीकाले हामीले माथि हाईलाईट गरेका भन्दा फरक छ। त्यसकारण यो निर्धारण गर्न को लागी कुनै कारण छैन कि उसको प्रेम यी मूल्यांकनहरु अनुसार घट्यो वा विपरितमा परिणत भयो। येशूले उहाँको स्वागत, उहाँलाई पछ्याउनको निम्तो अस्वीकार गर्नेहरूको निन्दा गर्नुहुन्न। तर उसले त्यस्ता अस्वीकारको नतिजाबारे चेतावनी दिन्छ। येशूद्वारा स्वीकार्य हुन र उहाँको प्रेमको अनुभव गर्न निश्चित प्रतिक्रिया चाहिन्छ, कुनै पनि वा कुनै प्रतिक्रिया होइन।
आफूले प्राप्त गर्ने विभिन्न प्रतिक्रियाहरू बीच येशूले देखाउने भिन्नता धर्मशास्त्रका थुप्रै अंशहरूमा प्रस्ट देखिन्छ। यस दृष्टान्तले बीउ छर्ने र बीउको कुरा गर्छ (जहाँ बीउ उसको शब्दको लागि खडा हुन्छ) एक अतुलनीय भाषा। त्यहाँ चार प्रकारका माटोहरू छन्, र केवल एक क्षेत्र भनेको येशूले आशा गर्नुहुने फलस्वरूप ग्रहणशीलता हो। धेरै केसहरूमा, उहाँ कसरी उहाँ, आफ्नो वचन वा आफ्नो शिक्षा, स्वर्गमा हुनुहुने आफ्ना पिता र उहाँका चेलाहरूलाई स्वेच्छाले स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुहुन्छ भन्नेमा जान्छ। जब धेरै चेलाहरू उहाँबाट पछि हटे र उहाँलाई छोडेर उहाँसंगै बाह्रैजनाले पनि यो गर्न चाहन्थे कि भनेर येशूले सोध्नुभयो। पत्रुसको प्रख्यात प्रतिकिले यस्तो लेख्यो: “प्रभु, हामी कहाँ जाऔं? तपाईंसँग अनन्त जीवनका शब्दहरू छन् " (यूहन्ना १:6,68:१)
येशूको परिचयका आधारभूत शब्दहरू जुन उसले मानिसहरूलाई ल्याउँदछ भन्ने कुरा उहाँकै आवाजमा झल्किन्छ: "मलाई पछ्याउनुहोस् [...]!" (मार्क १: १) उहाँलाई पछ्याउनेहरू नचाहने मानिसहरूभन्दा फरक हुन्छन्। प्रभुले उहाँलाई पछ्याउनेहरूको तुलना गर्नुहुन्छ जसले विवाहको निम्तो स्वीकार्छन् र निम्तो अस्वीकार गर्नेहरूसँग तुलना गर्छन् (मत्ती १०: १ -22,4 -२०) जेठो छोराले आफ्नो कान्छो भाइको फिर्तीको अवसरमा चाडमा आउन अस्वीकार गर्दा पनि यस्तै भिन्नता देखा पर्‍यो, यद्यपि उनका बुबाले उनलाई आग्रह गरे (Lk15,28)।
केवल येशूको चेतावनी पछ्याउन इन्कार नगर्नेहरूलाई चेतावनी दिइन्छ, तर उनको कललाई इन्कार पनि नगर्नुहोस् किनकि उनीहरूले अरूलाई पछ्याउनबाट पनि जोगाउँछन्, र कहिलेकाँही गोप्य रूपमा उनको कार्यान्वयनको लागि मैदान पनि तयार गर्दछन्। (लूका ११..11,46; मत्ती 3,7; २.23,27.२29-२XNUMX) यी चेतावनीहरू यति शक्तिशाली छन् किनकि उनीहरूले चेतावनी दिए अनुसार के गर्नु हुँदैन आशा राख्छ कि के हुँदैन भन्ने व्यक्त गर्छन्। चेतावनी हामी जसलाई ख्याल राख्छौं र उनीहरूलाई हामीसँग केहि गर्न को लागी हुँदैन। येशूलाई स्वीकार्नेहरू र उहाँलाई अस्वीकार गर्नेहरू दुवैमा समान प्रेम र स्वीकृति व्यक्त गरिएको छ। तर यस्तो प्रेम पनि इमान्दार हुँदैन यदि यसले फरक प्रतिक्रिया र उनीहरूसँग सम्बन्धित परिणामहरूको प्रतिक्रिया दिदैन।
येशूले सबैलाई स्वागत गर्नुहुन्छ र दुबैलाई उहाँ समक्ष खुला रहन र तयार रहन - परमेश्वरको राज्यको शासनको लागि आह्वान गर्नुहुन्छ। जे होस् नेटवर्क व्यापक छ र बीउ जताततै फैलिएको छ, आफूलाई स्वीकार, उहाँमा विश्वास र उसको उत्तराधिकारी निश्चित प्रतिक्रिया चाहिन्छ। येशूले तिनीहरूलाई एक बच्चाको अनुमोदनसँग तुलना गर्नुभयो। उनले यस्तो ग्रहणशीलता विश्वास वा उहाँमा राखिएको विश्वास भन्छन्। यसमा अरू कसैलाई वा अरू केहिमा अन्तिम भरोसा राख्न पश्चात्ताप समावेश छ। यो विश्वास पवित्र आत्माको कारण पुत्रको माध्यमबाट परमेश्वरको उपासनामा प्रकट हुन्छ। उपहार आरक्षण बिना सबैलाई दिइनेछ। त्यहाँ कुनै पूर्व शर्तहरू छैनन् कि सम्भावित लाभार्थीहरूले अस्वीकार गर्न सक्दछन्। यो बिना शर्त प्रदान गरिएको उपहारको स्वीकृति, तथापि, प्राप्तकर्ताको पक्षमा प्रयाससँग जोडिएको छ। यसको लागि उसको जीवनको पूर्ण त्याग र उहाँ, पिता, पिता र उहाँसँग पवित्र आत्मामा समर्पण गर्नु आवश्यक छ। प्रभुलाई केहि पनि भुक्तानी गर्न कोशिस गर्नुपर्दैन ताकि ऊ हाम्रोलागि आफूलाई अर्पण गर्न इच्छुक होस्। हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा उहाँलाई ग्रहण गर्न हाम्रो हातहरू र हाम्रो मुक्तिलाई स्वतन्त्र तुल्याउने प्रयास यो हो। के हामी नि: शुल्क प्राप्त गर्दछौं हाम्रो तर्फबाट प्रयास संग जोडिएको छ ताकि हामी त्यसमा भाग लिन सक्नेछौं; किनभने पुरानो, भ्रष्ट अहंकारबाट फर्केर उहाँबाट नयाँ जीवन प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
परमेश्वरको शर्तको अनुग्रह प्राप्त गर्न हाम्रो पक्षले के लिन्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण बाइबलमा बताइएको छ। पुरानो नियममा यो भनिएको छ कि हामीलाई नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा दुबै चाहिन्छ, जुन एक दिन परमेश्वर आफैले हामीलाई दिनुहुनेछ। नयाँ नियमले हामीलाई भन्दछ कि हामी आध्यात्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्मेको हुनुपर्दछ, नयाँ व्यक्तिको खाँचो छ, आफैंबाट बाँच्न छोड्नुपर्दछ, र यसको सट्टामा ख्रीष्टको शासनमुनिको जीवन बिताउनु पर्छ जसलाई हामीलाई आध्यात्मिक नवीकरण चाहिन्छ - पछि नयाँ सृष्टि गरियो। ख्रीष्टलाई नयाँ आदम बनाउनुहोस्। पेन्टेकोस्टले केवल पवित्र आत्मा पठाउनुलाई उहाँ आफैंमा अन्तर्निहित हुनु भनेर मात्र संकेत गर्दैन, तर हामीले यो पनि बुझाउँदछ कि हामीले उहाँको पवित्र आत्मा, येशूको आत्मा, जीवनको आत्मा, उहाँलाई हामीभित्र ग्रहण गर्नुपर्दछ र उहाँद्वारा पूरा हुनुहुनेछ।
येशूका उखानहरूले यो स्पष्ट पार्दछ कि उसले हाम्रो लागि उपहार दिन्छ कि भनेर उसले अपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया हाम्रो पक्षमा एक प्रयास समावेश छ। बहुमूल्य मोतीको प्याराबलहरू वा धन भण्डार गर्ने मैदानको खरीदमा ध्यान दिनुहोस्। सहि उत्तरदाताहरूले आफुले पाएको के प्राप्त गर्नका लागि सबै चीज त्याग गर्नुपर्दछ (मत्ती .13,44.२46; १.XNUMX.।) तर जसले अरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् - यो भूमि, घर, वा परिवार होस् - येशू र उहाँका आशिष्‌हरू साझा गर्दैनन् (लूका .9,59 ..14,18;; लूका १.20.१XNUMX-२०)
येशूले मानिसहरूसँग गर्नुभएको व्यवहारले यो स्पष्ट पार्दछ कि उहाँलाई पछ्याउनु र उहाँको सबै आशीर्वादमा बाँड्न सबै कुराको कामको खाँचो पर्दछ जुन हामीले हाम्रो प्रभु र उहाँको राज्यलाई भन्दा बढि मूल्यको रूपमा लिन सक्छौं। यसमा भौतिक धनको सम्पत्ति र यसको स्वामित्वको त्याग समावेश छ। त्यस धनी नेताले येशूलाई पछ्याएनन् किनभने उनले आफैंलाई आफैंबाट अलग गर्न सकेनन्। फलस्वरूप, उनले प्रभुले उनीलाई दिनु भएको चीजहरू प्राप्त गर्न सकेनन् (लूका,, १-18-२18) व्यभिचारको दोषी दोषी महिलालाई पनि आफ्नो जीवन मौलिक परिवर्तन गर्न आह्वान गरिएको थियो। क्षमा गरिसकेपछि, उसले पाप गरिरहनु पर्दैन (यूहन्ना १:8,11:१) बेट्सदा पोखरीको मान्छेलाई सम्झनुहोस्। ऊ त्यहाँ बस्नको लागि तयार हुनुपर्‍यो र बिरामीलाई पनि। "उठ्नुहोस्, आफ्नो खाट लिनुहोस् र जानुहोस्!" (यूहन्ना::,, गुड न्यूज बाइबल)।
येशूले सबैलाई स्वागत गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई स्वीकार्नुहुन्छ, तर उहाँसँगको प्रतिक्रियाले पहिले जस्तो कसैलाई छोड्दैन। प्रभुलाई प्रेममा माया हुदैन यदि उसले उनीहरूलाई मात्र छोड्छ उसले पहिलो भेटमा उनीहरूलाई भेट्टायो। ऊ हामीलाई धेरै माया गर्छ कि उसले हामीलाई सहानुभूति दर्शाउँछ वा हाम्रो भाग्यको लागि दया व्यक्त गर्दछ। होइन, उसको प्रेमले च he्गाइ, रूपान्तरण र जीवनशैली परिवर्तन गर्दछ।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा नयाँ नियमले निरन्तर घोषणा गर्दछ कि उहाँ हाम्रो लागि भण्डार भएको सबै चीजसहितको निःशर्त प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै आफैलाई इन्कार गर्ने काममा सामेल हुनुहुन्छ। (आफैंबाट टाढा फर्कनुहोस्)। यसमा हाम्रो गर्व बगाउने, हाम्रो आत्मविश्वास, धार्मिकता, उपहार र क्षमताहरूको परित्याग समावेश छ, जसले हाम्रो जीवनको हाम्रो आत्म-सशक्तिकरण समावेश गर्दछ। यस सम्बन्धमा, येशू चकित पार्दै यसो भन्नुहुन्छ कि जब ख्रीष्टको पछि लाग्ने कुरा आउँछ, हामीले "बाबु र आमासँग फुत्किनुपर्दछ"। तर यसको पछाडि उहाँलाई पछ्याउनु भनेको हामीले आफ्नै जीवनहरू पनि तोड्नुपर्दछ - गलत धारणाबाट हामी आफैंलाई आफ्नो जीवनका स्वामी बनाउन सक्छौं। (लूका १ 14, २-26-२27, गुड न्यूज बाइबल)। जब हामी येशूसँग स involved्लग्न हुन्छौं, हामी आफ्नै लागि बाँच्न छोड्छौं (रोमी १ 14: --7) किनकि हामी अर्कोका हौं (२ कोरिन्थी १ 1:१:6,18)। यस अर्थमा हामी "ख्रीष्टका दासहरू" हौं। (एफिसी २:१:6,6)। हाम्रो जीवन पूर्णतया उहाँकै हातमा छ, यो उहाँको प्राविधिकरण र निर्देशन हो। हामी उहाँसँग सम्बन्धमा रहेका छौं। र किनकि हामी ख्रीष्टसँग एक हौं, "वास्तवमा, म अब बाँच्दिन, तर ख्रीष्ट मभित्र बास गर्नुहुन्छ"। (गलाती 2,20:१)।
वास्तवमा, येशूले सबैलाई स्वीकार्नुहुन्छ र उसलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। उहाँ सबैको लागि मर्नुभयो। र उहाँ सबैसँग मेलमिलापमा हुनुहुन्छ - तर यी सबै हाम्रा प्रभु र उद्धारकको रूपमा छन्। उसको स्वागत छ र आफैंलाई स्वीकार्नु भनेको प्रस्ताव, निमन्त्रणा हो जसलाई प्रतिक्रिया चाहिन्छ, स्वीकार्न इच्छुक हुनु हो। र स्वीकार्न यो इच्छुकता अपरिहार्य रूपमा जे उहाँ हो को रूप मा स्वीकार्न को लागी सम्बन्धित छ, हामी स्वीकार गर्न को लागी तयार छ - कुनै र अधिक कम। यसको मतलब हाम्रो प्रतिक्रियामा पश्चाताप पनि समावेश छ - सबै कुराबाट अलग्गै रहन जसले हामीलाई उसले प्रदान गर्ने कुरा प्राप्त गर्नबाट रोक्छ र के हामीसँग उहाँसँगको स fellow्गतिको मार्गमा खडा हुन्छ र उहाँको राज्यमा बस्ने आनन्दको। यस्तो प्रतिक्रिया प्रयास समावेश छ - तर एक प्रयास जुन यसको लागि लायक हुन्छ। किनभने हाम्रो पुरानो आत्मको घाटाको लागि हामी एक नयाँ आत्म प्राप्त गर्दछौं। हामी येशूको लागि ठाउँ सिर्जना गर्दछौं र उहाँको जीवन परिवर्तन गर्ने, जीवन दिनुहुने अनुग्रह खाली हात पाउँदछौं। येशू हामीलाई परमपिता परमपिता परमपिता परमपिता परमपिता परमपिता परमपिता परमपिता परमपिता परमपिता परमात्मा उहाँ र उहाँको सदाको लागि स्वस्थ र आत्मिकरुपले पुनर्जन्मको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ।
को थोरै कुरामा भाग लिन चाहन्थ्यो?
डा बाट ग्यारी डेड्डो